January 26, 2021 - ApannPyay Media
January 26, 2021 by ApannPyay Media
တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ မှိုကွန်ချာကိုတွေ့ရင် မဖြစ်မနေ အရယူထားပါ
တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ မှိုကွန်ချာကိုတွေ့ရင် မဖြစ်မနေ အရယူထားပါ ကျော် မှတ်ထားတာလေးကို မျှဝေတာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က FB မသုံးစွဲကြပါဘူး နတ္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ဖတ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာက အခုလို ဆေးဖက်ဝင်သော အကြောင်းရာတွေကို အကိုးကားနဲ ပါလေ့ရှိပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးဝင်ပြီး အစွမ်းထက်သော အရာများကို မှတ့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ မှတ်ထားတဲ အကြောင်းရာလေးကဒီလိိုပါ ဟင်္သတ မြိုနယ် တောရွာဘက်က ဦးလေးတယောက်ဟာ အရိုးကင်ဆာ ဖြစ်လို ဆေးရုံက ခြေထောက့် တဖက် ဖြတ်ဖို ရက်ချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ ထိုဦးလေးဟာ ခြေထောက်တဖက်တော့ မဖြတ်တော့ဘူး ဒီအတိုင်းသာ အသေခံသွားမယ်ဟု ဆိုကာ အရိုးကွဲမတတ့် ကိုက့်ခဲ နေသော ဝေဒနာကို ကြိတ်မှိတ်ပြီး အန်တုကာခံနေပြီး ဆေးရုံရက်ချိန်ကို မသွားတော့ပါဘူးတဲ့ … Read more
ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးမီးလောင်ပေမယ့်အံ့သြဖွယ်မီးကွင်းခဲ့တဲ့ရုပ်ပွားတော် သူငယ်ချင်းတို့ရေ အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြချင်လို့ပါ။ အဲ့ဒါကတော့ မြင်းခြံမြို့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုလုံး မီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပေမယ့် မီးမလောင်ပဲ အံ့သြဖွယ်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လ ၁၄ ရက်နေ့က မြင်းခြံမြို့ ဗိုလ်ချူပ်ကျောင်းကြီး မီးလောင်မှုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ တကျောင်းလုံးမီးလောင်ခံခဲ့ရပေမယ့် ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကတော့ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမီးမကူးခဲ့တာပါ။စေတနာရှင်တစ်ဦးက ဒီရုပ်ပုံတွေကို အားလုံးဖူးမြော်နိုင်စေဖို့ ဝေမျှထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး တွေ့ရှိရချိန်မှာ ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ သပ္ပယ်လှတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေကို ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြည်ညို ကုသိုလ်ယူနိုင်စေဖို့ ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာနိုင်ကြပါစေ။ Credit Unicode ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုလုံးမီးေလာင္ေပမယ့္အံ့ၾသဖြယ္မီးကြင္းခဲ့တဲ့႐ုပ္ပြားေတာ္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ အရမ္းထူးဆန္းတဲ့ အေၾကာင္းေလး ေျပာျပခ်င္လို႔ပါ။ အဲ့ဒါကေတာ့ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုလုံး မီးေလာင္ကၽြမ္းသြားခဲ့ေပမယ့္ မီးမေလာင္ပဲ အံ့ၾသဖြယ္က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ေတြအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့လ ၁၄ ရက္ေန႔က … Read more
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များ လုံးဝမသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများ
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များ လုံးဝမသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များ မသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများ အလှကုန်ပစ္စည်းတိုင်းက အသားအရေအလှအပကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အလှကုန်ပစ္စည်းတိုင်းက မိမိအသားအရေနဲ့ မတည့်တာကြောင့် သေချာရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီများပြားလှတဲ့ အလှကုန်တွေထဲကမှ အရေပြားဆရာဝန်တွေက မသုံးစွဲဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။ ဘော်ဒီလိုးရှင်းနဲ့ လက်အတွက်လိုးရှင်းများ လိုးရှင်းတွေမှာ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုများစွားပါဝင်ပြီးတော့ အသားအရေမခြောက်ဖို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုးရှင်းထက်စာရင် ခရင်မ်တွေက အသားထဲပိုစိမ့်ဝင်နိုင်တာကြောင့် ခရင်မ်များကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Sunscreen စပရေးများ စပရေးများကိုဖြန်းတဲ့အခါ အရေပြားပေါ်မရောက်ဘဲ သူ့ရဲ့အာနိသင်ကပြယ်သွားတဲ့အပြင် အသားထဲထိစိမ့်မဝင်နိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ နေရာင်ကာခရင်မ်လိုမျိုး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ခြေထောက်ပေါင်းတင်ဆေးများ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များက ခြေထောက်ပေါင်းတင်ဆေးများသုံးစွဲဖို့ကိုလည်း အားမပေးပါဘူး။ ခြေထောက်ပေါင်းတင်ဆေးများအစား ခရင်မ်များကိုသာ အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် ခြေဖနောင့်အသားမာတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးပြီး ခြေဖဝါးလေးများကို နူးညံ့စေပါတယ်။ အမဲရောင် မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေး အမဲရောင်မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးများက … Read more
ဝယ်တဲ့နွားနို့ ရေဘယ်လောက်ရောထားလဲ အတိအကျ သိနိုင်တဲ့နည်းလေးပါ
ကိုယ်ဝယ်တဲ့ နွားနို့မှာ ရေ ဘယ်လောက်ရောထားလဲ သိနိုင်မည့် နည်းလမ်းလေးပါ ။ နွားနို့ အစစ်ပါလို့ ပိတ်ငြင်းနေတဲ့ သူတွေကို ဒီလိုလေးလုပ်ပြီး ပြန်ငြင်းကြရအောင်။ နွားနို့နဲ့ ရေနဲ့ ရောသွားလို့ ရေကို ပြန်ထုတ်လို့ မရဘူးလားဆို တော့ ရပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလေးနဲ့ ပြန်ဖယ်လို့ရပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကို သိတဲ့သူတွေ သိပါတယ် ။ မသိသေးသော သူများလည်းရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါဗျ။ ပထမဦးစွာ နွားနို့ကို ဘူးထဲ အရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး ခဲအောင် လုပ်ထား ပေးပါ။ အောက်က ပုံလိုလေး။ ခဲသွားလို့ ပြန်ထုတ်ယူပြီးလျင် အပြင်မှာ ထား‌ပေးပါ။ နွားနို့ကတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ အရေပျော် သွားနိုင်ပေမယ့် ရေကတော့ ခဲပြီး ကျန်ခဲ့မှာပါ။ … Read more
ပိုက်ဆံချေးပြီး ပြန်မဆပ်ပဲ တိုင်ချင်ရာတိုင်ဆိုတဲ့ လူတွေသိအောင် ဒီပို့ကို ပြလိုက်ပါ
ပိုက်ဆံချေးထားပြီး ပြန်မဆပ်ပဲ တိုင်ချင်တဲ့နေရာ တိုင်ဆိုပြီး ပြောလာရင် ဒီစာဖတ်မဂ်လာပါပရိတ်သတ်ကြီးရေ ခင်မင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တခြားသောအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံ ချေးထားမိတဲ့ သူများအတွက်သိထားသင့်တာလေးတွေ ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံချေးထားမိလို့ ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလို့ရပါပြီ။ မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် ခင်ဗျားတို့ငွေတိုးချေးစားထားတာ ကျုပ်တို့တိုင်လိုက်ရင်ထောင်ထဲ ၅ နှစ်ရောက်သွားမယ်။ စသည်ဖြင့် ဒီလိုစကားတွေ ခဏခဏကြားနေရပါတယ်။ဘယ်သူက စလိုက်တယ်တော့မသိပါဘူး။ ဒီစကားလေးက ငွေချေးပြီး ပြန်မဆပ်ချင်သူတွေရဲ့ လက်သုံးစကား လက်နက် ကြီး တစ်ခုလိုဖြစ်လို့နေပပါပြီ။ ဒီတော့ ငွေရှင်ဆိုတာလည်းလည်း အတိုးလေးရလို့ ချေးမိတာ ။ အခုပြန်တောင်းတော့ တချိန်က မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ဆီက ငွေချေးခဲ့တဲ့ သူက အခုတော့ မျက်နာထားကြီးတင်းပြီး ကိုယ်ကပဲ သူဆီက ပြန်ချေးနေသလိုလို … Read more
နစ်နာစရာရှိရင် မိန်းခလေးတွေပဲနစ်နာရတာမို့ သတိလေးထားကြပါနော်
နစ်နာစရာရှိရင် မိန်းခလေးတွေပဲနစ်နာရတာမို့ သတိလေးထားကြပါနော် “ငါ့သမီးကို အမေမှာချင်တယ်” ငါ့သမီးလေးရယ် ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတာတော့ ခေတ်သဘာဝမို့ အမေမပြောလိုပါဘူး။ သမီးရယ် ဒါပေမယ့် မေမေမှာချင်တာက ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ထား ခြင်းမရှိဘဲ ရည်းစားတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ထားပြီးဓာတ်ပုံတွေ တွဲရိုက် တွဲတင်နဲ့ မေမေသူများတွေပြောလို့ အကုန်သိပြီးပြီ သမီး ။ သမီးရယ် … သမီးရည်းစားက တကယ်လို့သမီးနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မရခဲ့ဘူး မယူဘူးဆို ရင် ငါ့သမီးဘဝလေးကို ဘယ်ယောက်ျားလေးက တန်ဖိုးထားမှာလဲ…??? ပြီးတော့မေမေတို့ မျိုးရိုး ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုလည်း ငဲ့ကြည့်ပါဦးသမီးရေ … ခုတော့ … သမီးက ငါ့ရည်းစားလေး ဘယ်လောက်လှတယ် ဘယ်၍လှတယ်နဲ့ ကြွာချင်ပြီး လိုင်းပေါ်တွဲတင်တော့မေမေတို့ကို ပတ်ဝန်းကျင် က ပြောလာပြီ သမီးရေ မဆုံးမဘူးလား မအုပ်ချုပ်ဘူးလားတဲ့…??? နောက်တစ်ခါ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ရည်းစားနဲ့ ဓာတ်ပုံ … Read more
ဇလားဗီးယားငါးကို လုံးဝမစားပဲ အသက်ရှည်ရှည်နေလိုက်ပါ
ဇလားဗီးယားငါးကို လုံးဝမစားပဲ အသက်ရှည်ရှည်နေလိုက်ပါ ကျွန်တော် တို့ ဇလား ပီးယားငါးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ် ။ မွှေးနေတဲ့ ငါးကင်ကို စျေးကြီးပေးပြီးတော့ကိုစားတယ် ၊ စားလို့လဲကောင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတော့ မစဉ်းစားမိကြဘူး ။ ဇ လားဗီးယားငါးတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ကျယ်ပြန့်စွာမွေးမြူပြီးစားသုံးနေကြတဲ့ ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ကင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုချက်စားစား စားကောင်းပြီး စျေးနှုန်းလည်း သင့်တင့်တာကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဇလားဗီးယားငါးတွေဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အလွန်အကျွံ မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ဒီမှာပါ။ (၁) မွေးမြူရေးငါးတွေဖြစ်တယ် ဇလားဗီးယားငါးတွေဟာ များသောအားဖြင့် ငါးကန်ထဲမှာ ကျပ်သိပ်နေအောင် မွေးမြူထားတဲ့ မွေးမြူရေးငါးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငါးတွေဟာ အစားမရွေးတာကြောင့် ဘာကျွေးကျွေးစားကြပါတယ်။ … Read more
ဝါညစ်နေတဲ့သွားတွေကို ဖြေးဖြေးချင်းစီပြန်ဖြူလာစေမယ့် နည်းလမ်း
ဝါညစ်နေတဲ့သွားတွေကို ဖြေးဖြေးချင်းစီပြန်ဖြူလာစေမယ့် နည်းလမ်း သွားဖြူချင်တဲ့သူတွေနဲ့ သွားဝါလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဝါညစ်နေတဲ့သွားတွေကို ဖြေးဖြေးချင်းစီပြန်ဖြူလာစေမယ့် အိမ်တွင်းဖြစ်နည်းလမ်းကောင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ချက်ချင်းကြီးဖြူလာမှာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမယ့် ၃ ရက် တစ်ခါ၊ ၅ ရက် တစ်ခါ ပုံမှန် မပျက်အကွက် လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဝါနေတာတွေ တဖြေးဖြေးလျော့သွားပြီး ပြန်ဖြူလာမှာပါ။ မျိုးရိုးအရသွားဝါတာမျိုးကျတော့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလောက်နဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ သွားဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး လေဆာပစ်တာမျိုးလုပ်မှသာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ သံပယိုရည် (သို့) သံပုရာရည်၊ သွားတိုက်ဆေး၊ နနွင်းမှုန့်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ရမယ့်ပုံစံကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ ၅ တက်ကို အခွံခွာပြီး ပန်းကန်လုံးလေးထဲ ခြစ်ချပေးပါ။ သံပယိုရည် (သို့) သံပုရာရည်ကို စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစာ ညှစ်ချပြီးနယ်ပေးပါ။ သွားတိုက်ဆေးကိုလည်း စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ … Read more
ဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဝိတ်ကျစေမယ့် နည်းလမ်း
ဘေးဥပါဒ် မဖြစ်စေဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဝိတ်ကျစေမယ့် နည်းလမ်း ဝိတ်ကျဖို့ဆိုတာ မိန်းကလေးအများစုရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် ပန်းတိုင်တစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဝတ်ချင်တဲ့ အကျီ၊ ဂါဝန်လေးတွေ ဝတ်နိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ကူးထဲက လိုချင်မိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလေးရဖို့ ကြိုးစားရတာလည်း တစ်နေ့တစ်နေ့ အမောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နည်းမှန်လမ်းမှန်အတိုင်း မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား ရလဒ်ကောင်းတွေက ဝေးသထက် ဝေးသွားလို့နေပါလိမ့်မယ်။ တတ်နိုင်သမျှ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပေးပါ ကိုယ်စားနေတဲ့ ထမင်းဟင်းပွဲထဲမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အသီးအရွက်တွေပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ဝိတ်ကျဖို့အတွက် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် စတက်နေပါပြီ။ မနက်စာ ကောင်းကောင်းစားပါ အစာစားချိန်တွေအကုန်လုံးက တန်းတူအရေးပါတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တစ်နေကုန် ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့အတွက် မနက်စာကောင်းကောင်းစားဖို့ကတော့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ မနက်စာစားတဲ့အခါ ကယ်လိုရီ ၄၀၀ နဲ့ ၅၀၀ ကြားရှိတဲ့ အစားအစာများကို ရွေးချယ်ပေးပြီး ကြက်ဥ၊ … Read more